​मह जोडी देखी दिपक दिपा सम्म लागे फिल्म ‘शेरबहादुर’ को प्रचार प्रसारमा
काठमाडौं । फिल्म ‘शेरबहादुर’ को प्रदर्शन मिती नजिकिदै गर्दा प्रचार प्रसार पनि तिब्र रुपमा भइरहेको छ । यहि माघ १९ गते बाट रिलिजमा आउन लागेको फिल्म शेरबहादरको बारेमा मह जोडीका बरिष्ठ कलाकार मदन कृष्ण श्रेष्ठ र हरि बंश आचार्यले फिल्म र निर्माता गौरी शंकर धुजुको....
​स्व. नायक श्रेष्ठकी पत्नी खड्काले विवाह गर्ने
न्यूजलय बिहीबार १८, माघ २०७४
काठमाडौं । स्व. नायक श्रीकृष्ण श्रेष्ठकी पत्नी नायिका स्वेता खड्काले विवाह गर्ने भएकी छिन् । पछिल्लो समय उनले आमाको दबाबमा आएर विवाह गर्ने निर्णयमा पुगेकी हुन् ।
विभिन्न मिडियाहरुले लिएको अन्तर्वार्तामा उनले आमाको दबाबमा आएर विवाह गर्न लागेको बताएकी छन् ।
फिल्म ‘केशरी’मा अक्षयको नयाँ लुक्स
काठमाडौं । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको नयाँ चलचित्र ‘केशरी’को लुक्स सार्वजनिक भएको छ । उक्त फिल्मका पहेँलो रङको पगडी र लामो दारीमा अक्षय पन्जाबी सरदरको भूमिकामा प्रस्तुत भएका छन् । फिल्ममा अक्षय कुमारका साथमा परिणिती चोपडा देखीनेछिन् ।
‘केशरी’ १८९७ मा एक ब्रिटिस भारतीय....
दीपिका र कट्रिना बिच किन भयो झगडा ?
काठमाडौं । नायिका दीपिका पादुकोण र नायिका कट्रिना कैफ बिचको झगडाले चर्चा पाइरहेको छ । दीपिका कट्रिनासँग निकै आक्रोसित भएको खबर बाहिरिएको छ । केही वर्ष अघि दीपिका अभिनेता रणबीर कपुरसँग प्रेम सम्बन्धमा थिइन् । यी दुई खुलेर मिडियामा आफ्नो प्रेमलाई स्वीकार गरेका थिए ।....
‘धुम–४’ मा शाहरूखका छोरा आर्यन
न्यूजलय मङ्गलबार १६, माघ २०७४
मुम्बई । लन्डनमा चलचित्रसम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका बलिउड अभिनेता शाहरूख खानका छोरा आर्यन खान चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने भएका छन् ।
आर्यन खान चलचित्र ‘धुम–४’मार्फत नायकका रूपमा देखीने भएका हुन् । यसअघि फिल्म निर्माणमा आफ्ना बुबा शाहरूख खानलाई सघाउँदै आएका आर्यनले केही सर्ट फिल्मको सहनिर्देशन....
चलचित्र ‘तुँवालो’ को फष्ट लुक सर्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र ‘तुँवालो’ को फष्ट लुक पोष्टर सर्वजनिक गरिएको छ ।
चलचित्रले दलित समुदाय र बैदेशिक रोजगारको कथालाई समेटेको निर्माता गिरिप्रसाद सुनारले जानकारी दिए ।
दीपक परियारको निर्देशन रहेको चलचित्रमा सुशील क्षेत्री, पूजा पराजुली, रमेश आब्जु, सुरेन्द्र बराल, रस्मि भट्ट, गिरीप्रसाद....
चलचित्र ‘मंगलम्’को प्रदर्शनपछि छविराज र शिल्पाले विवाह गर्ने
काठमाडौं । चलचित्र ‘मंगलम्’को प्रदर्शनपछि निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरेलले विवाह गर्ने भएका छन् । सोमबार नेपालगञ्जमा पत्रकारहरुसँग ओझाले चलचित्र ‘मंगलम्’को प्रदर्शनपछि विवाह गर्ने जानकारी गराएका हुन् ।
यही माघ २५ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र ‘मंगलम्’को प्रचार–प्रसारका युनिटले आयोजना गरेको पत्रकार....
​भाइरल भयो मानसको गीत
काठमाडौं । ‘पारी त्यो डाँडामा‘’ बोलको गीतले बेजोड चर्चा पाएको थियो । ‘रेशम फिलीली’ फिल्ममा समावेश यस गीतले चर्चा पाएता पनि यो गीतका रचनाकार मानसराजले भने चर्चा पाउन सकेनन् ।
उनै मानसराज यतिबेला ‘भाइरल भयो’ गीतका कारण संगीतप्रेमी दर्शकका लागि साँच्चै भाइरल भएका छन्....
‘पद्मावत’ले कमायो हप्ता दिन नपुग्दै सय करोड
न्यूजलय सोमबार १५, माघ २०७४
काठमाडौं । बलिउडको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै विवादित भनेको ‘पद्मावत’ चलचित्रले प्रदर्शनको एक हप्ता नपुग्दै एक सय १५ करोडको व्यापार गर्न सफल भएको छ ।
चलचित्रको जति चर्को विवाद भएको थियो त्यति नै धेरै संख्यामा दर्शक फिल्म हेर्नका लागि हलमा गइरहेका छन् । जसका कारण....
गायक उत्तमको ‘ह्यापी भ्यालेन्टाइन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाडौं । ‘भ्यालेन्टाइन डे’लाई लक्षित गरि गायक उत्तम विक्रम विष्टले ‘ह्यापी भ्यालेन्टाइन’ बोलको गीती भिडियो सार्वजनिक गरेका छन् ।
भिडियोमा गायकले आफनी प्रेमीकालाई विशेष दिनको प्रतिक्षा गर्नको लागी आग्रह गरेका छन् । उक्त गीतले यसपटकको भ्यालेन्टाइन उल्लासमय र अविस्मणिय बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले हरेक....
भोटेकोसीमा आएको बाढीले दर्जनौं घर बगाउँदा थुप्रै बेपत्ता, दुई जनाको शब भेटियो